RW Israel oo Kenya u balanqaaday taageero lagula dagaalamayo argagixisada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldRW Israel oo Kenya u balanqaaday taageero lagula dagaalamayo argagixisada
July 7, 2016 Abdi Omar Bile World 0
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata iyo Raysulwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyata ayaa cadeeyay in Raysulwasaaraha Israel uu u balanqaaday taageero haayadaha amaanka ee dalka Kenya.
“Waxaanu samaysanay wada shaqayn weyn oo lagula dagaalamayo argagixisada waxaan si weyn uga faa’idaysan doonaa qorshaha istiraajiyadeed ee wada shaqaynta ah,” ayuu ka yiri madaxweyne Uhuru khudbad taleefishinka laga sii daayay.
Wakhtigan la joogo Kenya ayaa ka hesha taageero qalab militari ah Israel, sida ay sheegayaan warbixinada.
RW Israel Benjamin Netanyahu ayaa asbuucaan booqasho ku yimid wadamo kuyaala Geeska Afrika markii kowaad oo Kenya kamidtahay.
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Madaxweynihii maamul goboleedka Amxaarada ee dalka Itooboya ayaa la dilay, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Itoobiya. Ambachew Mekonnen iyo la tayilihiisa ayaa lagu dilay isku day afgembi oo ka dhacay caasimada maamul goboleedka [...]